Mashaariicda - Zhongshan City YALIS Hardware Products Co., Ltd.
YALIS Naqshaduhu waxay ku siin karaan shuruudaha qalabka albaabkaaga qaabdhismeedkooda, laga bilaabo gacan-qabsiga albaabka ilaa albaabbada albaabbada, albaabbada albaabka ilaa daawadayaasha albaabka, ilaalada albaabka ilaa furaha albaabka iyo albaabka u dhow, YALIS waxay kuu soo geli kartaa taxane ah xalka qalabka albaabka ee ku saleysan zinc alloy, aluminium aluminium iyo ahama. qalabka birta.
Naqshadeynta YALIS waxay la qabsan kartaa mashaariicdaada dhismo, waxaana halkan ku yaal qaar ka mid ah mashaariicda dhismaha iyo dhismayaasha ku yaal meelo kala duwan oo adduunka ah.
International Lake City waxay ku taalaa Chongqing, horumariyuhu waa Xiangjiang International China Real Estate Co., Ltd. Mashruucan waxaa ku jiray labadaba xayaysiisyo iyo degaan, sida hoteelo, fillo, xafiisyo, guryo dabaqyo ah, iyo dalxiisyo.YALIS waxa ay sharaf u tahay in ay ka qayb qaadato mashruucan oo ay noqoto hal xubin si ay u bixiso qalabyada albaabka.
Australia River-stone waxa lagu habeeyey YALIS BF74204 taxane quful qaybsan oo dhan mashruuceeda.Iyadoo lagu qanacsan yahay tayada, YALIS waxay ka bilowday xiriir iskaashi oo muddo dheer ah suuqa Australia.
Blooming Tower waa mashruucii ugu horeeyay ee munaaradaha mataanaha ah ee magaalada Da Nang kaas oo la bilaabay dhismihiisa bishii Juun 2008 iyada oo miisaankeedu yahay dhismaha munaarad kasta oo ka kooban 37 dabaq.Alaabta la bixiyay: Quful smart ee albaabka weyn ee HIONE iyo quful leh qalabka Yalis.
Beerta dayrta waxay ku taal Shanghai, aagga CBD.Waxay qaateen YALIS BF7037 taxanaha qufulka ee mashruuciisa oo dhan.Isku darka filooyinka leh qalab albaab oo tayo sare leh, qeex guryaha ayaa la sameeyay.
YALIS BF taxane albaabbada gacanta, ayaa lagu isticmaalay Hotel Baltschug ee Kempinski, Moscow.YALIS, oo ah bixiyaha albaabka gaarka ah ee mashruuca.
Jordan Springs ee Israa'iil
Israel Jordan Springs waa mashruuc caan ah oo ay ku jiraan 3 harooyin, xarumo ganacsi, iyo beero. Waa mashruuc qiyaastii 230 hm² isticmaalaya YALIS BF74223 & BF74229 qufulo kala qaybiya waqti oo dhan.